Imiyalelo kaGqirha: Yitya oku kutya kungama-20 ukubetha umhlaza wedlala lobudoda | - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Imiyalelo kaGqirha: Yitya oku kutya kungama-20 ukubetha umhlaza wedlala lobudoda
Imiyalelo kaGqirha: Yitya oku kutya kungama-20 ukubetha umhlaza wedlala lobudoda
Izondlo ezinamandla ezichasene nomhlaza zihlala zifunyanwa kwiziqhamo ezimibalabala.Ifoto: Flikr.
Xa unyangwa umhlaza wedlala lendlala, kubaluleke ngakumbi kunanini na ngaphambili ukuba utye usempilweni. Umzimba wakho usebenza ixesha elongezelelekileyo ukulwa nomhlaza, ngelixa usenza umsebenzi ophindwe kabini ukulungisa iiseli ezisempilweni ezinokuthi zonakaliswe njengempembelelo esecaleni kunyango olufana nekhemotherapy kunye nemitha. Ngexesha elifanayo, unyango oluninzi lomhlaza-ngakumbi i-chemotherapy-luza neziphumo ebezingalunganga ezomeleza amandla akho kunye nokunciphisa umdla wakho wokutya. Nazi iimbono zendlela yokuqinisekisa ukuba ufumana zonke izakha mzimba, iivithamini kunye neeminerali eziyimfuneko ukugcina ukutya okunezakha-mzimba okwandisa amathuba okubetha umhlaza wedlala lobudoda.
Nciphisa ikhalori yakho. Ukugqithisa kweekhalori akulunganga ekukhuleni komhlaza.
Intliziyo esempilweni yiprostate esempilweni. Isifo sentliziyo nguhayi. Umbulali o-1, kwanamadoda anomhlaza wesibeletho. Yitya ukutya okusempilweni kwiavokhado, isalmon, iflakisi, i-oatmeal, amajikijolo, itshokholethi emnyama enesiqulatho sekhokho esingama-70%.
Ukwahluka kokutya okutyayo kubalulekile. Musa ukutya ukutya okufanayo ngalo lonke ixesha.
Khumbula izongezo zongezelelo. Ayenzelwanga ukubuyisela endaweni ukutya okusempilweni. Soloko ujonga ugqirha wakho ngaphambi kokuba uthathe naziphi na izongezo njengoko zinokuphazamisa ukusebenza ngempumelelo komhlaza.
Indlela yokutya esempilweni ebonakala ukunciphisa umngcipheko womhlaza wedlala lobudoda kukutya kweMeditera. Le ndlela yokutya iphezulu kwiziqhamo kunye nemifuno, igalikhi, iitumato, iwayini ebomvu, i-oyile ye-olive, nentlanzi kwaye inyama encinci ibomvu.
Nciphisa amanqatha ezilwanyana kwindlela otya ngayo. Izifundo zibonisa ukuba amanqatha amaninzi, ikakhulu inyama ebomvu kunye nobisi olunamafutha aphezulu, avuselela umhlaza wedlala lobudoda ukuba ukhule.
Gwema ukutya okuphezulu kumafutha athengiswayo aziwa ukukhuthaza ukukhula komhlaza. Amafutha eTrans afumaneka kwimargarine, kwimicroves popcorn, eqhotsiweyo nakukutya okubhakiweyo.
Yandisa ukutya kweentlanzi, okuphezulu kwi-omega-3 fatty acids. Ngokufanelekileyo itya iintlanzi ezinamanzi abandayo ezifana nesalmon, isardadi, imackerel, ityhuna kunye netrout ubuncinci amaxesha amabini ngeveki. Le ntlanzi ifanele ifunyenwe, ibhakwe okanye ifakwe. Gwema intlanzi ethosiweyo.
Yandisa kakhulu ukutya kwakho iziqhamo, amayeza kunye nemifuno yonke imihla. Izondlo ezinamandla zomhlaza zifunyanwa rhoqo kwiziqhamo kunye nemifuno enemibala, imifuno esandula ukwenziwa, imifuno eluhlaza enamagqabi, amandongomane, amaqunube kunye nembewu.
Kuphephe ukutya okune-calcium ephezulu ebonakalise ukukhuthaza ukukhula komhlaza wedlala lobudoda. Akukho ngaphezulu kwe-1-2 servings ngosuku ngalunye ekucetyiswayo.
Yandisa ukusebenzisa ivithamin C yakho yendalo- oku kubandakanya amajikijolo, i-citrus, isipinatshi, i-cantaloupe, iipepile eziswiti kunye nemango.
Sela iti eluhlaza amaxesha ngamaxesha ngeveki.
Gwema ukutya okungaphezulu kokulondolozwa, okukhethiweyo, okanye okutyiwa.
Yitya iidiliya ezibomvu, usele i-100% yejusi yomdiliya okanye iwayini ebomvu rhoqo.
Yitya imifuno eluhlaza eluhlaza okrwada rhoqo.
Imifuno yeCruciferous ikhusela umhlaza. Oku kubandakanya ikhaphetshu, i-broccoli, icauliflower, iitheniphu, imifuno ekholekileyo, amahlumelo eBrussel, kunye ne-rutabagas.
Utamatisi kwaye ngakumbi iimveliso zetumato ziphezulu kakhulu kwi-lycopene, into enamandla yokulwa nomhlaza. Oku kubandakanya i-tomato sauce, i-tomato unamathela kunye ne-ketchup.
Sebenzisa i-oyile ye-olive, esempilweni kwaye ityebile ku-vitamin E kunye nee-antioxidants. Iiavokhado zikwangumthombo olungileyo nazo.
Jonga ugqirha wakho malunga nokuthatha ivithamin D3 isongezo sika-2000 IU yonke imihla. Oku kunokunceda ukomeleza amajoni omzimba ukulwa umhlaza.
Uphando lucebise ukuba ukuya kuthi ga kwi-4-5 iikomityi zekofu ngemini zinokunxulunyaniswa nomngcipheko omncinci womhlaza wesibeletho kunye nokuhla kweziganeko zomhlaza obulalayo kunye nomgangatho ophakamileyo webala.
Izigulana ezisandula kufunyaniswa ukuba zinomhlaza webala le-Prostate zinokunxibelelana nodokotela ogqirha womhlaza webele kunye ne-urologic oncologist UGqr. UDavid Samadi, Ukubonisana ngefowuni simahla kunye nokufunda ngakumbi ngomngcipheko womhlaza wedlala lobufazi, ngokutsalela umnxeba kule nombolo 212-365-5000 okanye undwendwele Yinyani.com.
Ugqirha Samadi yibhodi eqinisekisiweyo ye-urologic oncologist eqeqeshwe kutyando oluvulekileyo nolwesintu kunye ne-laparoscopic kwaye yingcali ye-robotic prostate. Ungusihlalo we-urology, inkosi yoqhaqho lwe-robotic kwisibhedlele i-Lenox Hill kunye nonjingalwazi we-urology e-Hofstra North Shore-LIJ School of Medicine. Ungumbhaleli kwezonyango kwiFox News Channel's Medical A-Team Funda ngakumbi kwi roboticoncology.com . Ndwendwela uGqirha Samadi blog kwi SamadiMD.com . Landela uGqirha Samadi Twitter , I-Instagram , IPintrest kwaye Facebook.
Nantsi inguqulelo yeVin Diesel yendlela eliDwala eliQalile ngayo
'Imililo Emincinci Yonke Indawo' I-Fizzles Apho Ifanele Ukutshisa
Awuyi Kuphela: UDenis Leary ubuyela kwiFX njengeRocker yaMinyaka ePhakathi elambile Udumo
Ezona mlomo ziLungileyo ziPhethe i-SPF yokuManzisa kunye nokuKhusela iPout yakho kweli hlobo
ukudibana okuphezulu kokungena kwi-com
iisayithi zonyaka kwiwebhu enzulu
Iincasa zesoda ezothusayo ziyathengiswa
phezu 50 ukuthandana sites simahla
inkwenkwezi enkulu yeenkwenkwezi